नाम कमाउनु ठूलो कुरा होइन, जोगाउनु ठूलो होः डान्सर तुलसा| Nepal Pati
नाम कमाउनु ठूलो कुरा होइन, जोगाउनु ठूलो होः डान्सर तुलसा
थेरापीमा मास्टर डिप्लोमा गरेकी सिन्धुलीकी तुलसा पहाडी अहिले डान्समा करिअर बनाउँदैछिन् । अब्बल डान्सर बनेर देश, विदेशमा नाम चिनाउने रुची भएकी तुलसासँग नेपालपाटी डटकमले गरेको कुराकानी ।
डान्सप्रति रुची कसरी भयो ?
म बच्चैबेलादेखि नाच्न मन पराउने मान्छे । गाउँमा हुने र स्कूल तथा कलेजमा हुने कार्यक्रमहरूमा नृत्य गर्ने गर्थेँ । अहिले ब्याचलर इन आर्ट पढिरहेको छु । रुची भएकै कारण डान्स पढिरहेको हुँ ।
तपाईले देख्नुभएको सपना चाहिँ के हो ?
असल नृत्याङगना भएर अन्य देशहरूमा नेपालको उपस्थिति देखाउन सकूँ भन्ने हो ।
त्यसको तयारीका लागि के के गर्नुभएको छ त ?
डान्स पढिरहेको छु, याक्टिङ पनि सिक्दैछु । इन्डियन एम्बेसी अफ कल्चरमा पनि सहभागी भएको छु । त्यहाँ हप्तामा दुई दिन हुन्छ । त्यो भन्दा बाहिर पनि डान्स नै गर्दैछु ।
नेपालमा डान्समा लाग्दा भविश्य छ ?
आफ्नो क्षमता छ भने राम्रो हुन्छ । क्षमता अनुसार जुनसुकै क्षेत्रमा पनि राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ । म त नेपालमा डान्समा काम गर्ने ठाउँ थुप्रै देख्छु । नजान्ने काममा हात हाल्नु भएन, काम जानेर हात हाल्दा राम्रो छ ।
अरुभन्दा तपाईमा फरक के ?
डान्स नर्मल्ली सवैले गर्नुहुन्छ । त्यसका साथसाथै गजल, कविता पनि लेख्छु ।
डान्समै फरक भन्न खोजेको ?
त्यस्तो त अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेकी छैन् । के छ थाहा छैन् । त्यो त अरुले हेरेर थाहा पाउने कुरा हो । डान्समा त म अब्बलै छु भन्ने लाग्छ । अरु भन्दा फरक चाहिँ दर्शकले भन्ने कुरा हो ।
तपाईँले कतै डान्स गर्नुप¥यो भने कति लिनुहुन्छ पारिश्रमिक ?
यति नै भनेर डिमान्ड गरेकी छैन् । त्यो त आयोजकमा भर पर्छ । अब्बल डान्सर बन्न चाहन्छु । अब्बल डान्सर भएपछि कसैले पनि फ्रिमा नाच्न त भन्दैन नि । कसैलाई पनि यति नै दिनुहोस् भनेको छैन, गएपछि हात खाली फर्कनु पनि परेको छैन् ।
चलचित्रमा अभिनय गर्ने रुची छ कि छैन् ?
आफूमा भएको कमजोरी र क्षमता सवै कुरा हेर्नुपर्छ । क्यारेक्टर गर्न रुचाउँछु तर लिड रोल गर्न सक्ने भइसकेकी छैन जस्तो लाग्छ । काम गरिरहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । कहाँ गएर क्लिक हुने हो कसैलाई पनि थाहा हुँदैन । ठूलो पल्टने मेरो वानी छैन् ।
समग्रमा नेपाली डान्स क्षेत्र कस्तो लाग्छ ?
मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ । कसैले भन्छन, कमजोरी हुन्छ, के हुन्छ तर मैले त अहिलेसम्म केही कमजोरी पनि देखिनँ, बाध्यात्मक परिस्थिति पनि देखिनँ ।
राम्रो के त ?
आफूँमा भएको क्षमता अनुसारको काम देखाउन सक्नुपर्छ । नाच्नै जान्दैन भन्ने त कसरी राम्रो हुन्छ त ? आफूमा कमजोरी भएपछि त जहाँ पनि समस्या भइहाल्छ । आफु अब्बल भएर जानुस न कसैले केही भन्नै सक्दैन नि ।
विकृतिहरू पनि छन्, त्यसकारण क्षमता भएकाहरू पछि परे पनि भन्छन नि ? ?
नाम कमाउन ठूलो कुरा होइन, जोगाउनु ठूलो कुरा हो । जोगाउन सक्ने क्षमता आफुमा छ भने मात्रै हाम फाल्नुस न । नामै कमाउन त जे गरेर पनि कमाइन्छ नि ।
यसको जस्तो डान्स गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कोही छ ?
इन्डियन याक्टर रितिक रोशनको जस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । उहाँलाई नै हेरेर डान्स गरिरहेको हुन्छु, सिकिरहेको पनि हो । नेपाली हिरोमा चाहिँ निर शाहको याक्टिङ मनपर्छ ।
भविश्यमा डान्समै मात्र लाग्ने हो कि अन्य पेशा व्यवसाय पनि अंगाल्नुहुन्छ ?
मेरो प्यासन भएर अहिले डान्स पढिरहेको छु । मैले आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि राजस्थानबाट थेरापीमा मास्टर डिप्लोमा गरेकी छु । केही समयपछि थेरापीको बिजनेश सुरु गरौँ कि भन्ने सोच छ । डान्स त गरिहाल्छु नि ।
डान्सले मात्रै चल्ने स्थिति रहेनछ होइन ?
त्यस्तो पनि होइन, चल्ने चलिरहेका छन् । मेरो आफ्नो दृष्टिकोण चाहिँ एउटा बिजनेश भयो भने डान्सलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ ।
मैले सिकाउने विद्यार्थीलाई मलाई फलो गर्नुहोस् भन्दिन, आफैँलाई फलो गर्नुहोस् । गन्तव्यमा पुग्न अरुको कपि गरेर हुँदैन । डाक्सर भएपछि क्रियसन आफ्नै हुनुपर्छ । सहकर्मी साथीहरूलाई अहिलेसम्मको साथ, सहयोग र सपोर्टका लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु । दर्शकहरूलाई भन्न चाहन्छु अहिलेसम्म चिन्नु भएको छैन होला, देख्नुभएको छैन होला, छिट्टै नै वेल डन हुनेगरी देख्नुहुन्छ । विश्वस्त रहनुहोसु भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।